Ukuqhumisa Izingxenye Zezimboni - China Ukuqhumisa Izingxenye Zabakhiqizi, Abahlinzeki
Isethi ephelele yokuqhumisa isanti nge-hose yomoya, isihlungi sokuphefumula umoya, umlawuli wokushisa
Ikhwalithi ephezulu ye-ABS Sandblast evikela isigqoko sokuzivikela nge-1m feed air hose
Ikhwalithi emaphakathi Ingcindezi yomsebenzi Intambo Ubukhulu sekukonke
(Umoya ocindezelweyo) 4-8kg 0.8kg 38mm * 210mm
Lesi sigqoko sokuzivikela sandblasting sisebenzisa nje amandla e-ABS material, eyodwa take, ngokuya ngamazinga okuphepha kazwelonke,
qinisekisa ukuthi ukwephula akuphuli; Ukungaziphathi kahle kwe-Avirulent, kunendawo ebomvu nephuzi, umbala ubukeka kahle,
ungalokothi ubune futhi uguqule umbala; Nge-inlet guide groove, vumela ukugeleza kokufaniswa komoya nxazonke, okujwayelekile kuya phambili kohlaka lwesithombe,
susa umoya wokuphefumula, uwenze ucace ngokwengeziwe umugqa wokubona, ukuze uwenze ucace ngokwengeziwe umugqa wokubona, ugweme ukushaywa umoya ekhanda, kubangele ukungakhululeki;
Inhloko enepayipi lokuhambisa igesi le-silica engeyona enobuthi, ukumelana nokugoba okuthambile; Umbono wangaphambili, sebenzisa induku ukufaka uphawu, usayizi wokudiliza ukudiliza okulula,
ungakhumuli izingubo zingaphendulwa ngqo iwindi lens elishintshiwe; Intamo ifakwe ukubekwa uphawu okunwebeka, ukufaka uphawu kangcono, amatshali kanye ne-bopha,
kulula ukugqoka. Ikhilogremu eyodwa kuphela yesisindo esiphelele sesethi ephelele yomkhiqizo;
Umkhiqizo uhlukaniswe: izigqoko zokuzivikela, isigqoko sokugqoka ngisho nezingubo, usayizi wesigqoko sokuzivikela, nakho kungenziwa kube ngokwezifiso.
Umkhiqizo unokusimama, ukuphepha, ukuvikelwa kwemvelo, ukhululekile, ulungele, uvaliwe ukusebenza kuhle ukulinda isici.
Ukuphepha kweSandblast Helmet Sand Blast Hood Protector Mask yokudweba
Isihlabathi Sokuqhumisa Ubuso Bokuvikela Ubuso beHood Cap Anti Uthuli Lomoya Isigqoko Sokuvikela Sand
Idizayinelwe ukuvikela ubuso bakho ezingozini zothuli
Ikhwalithi ephezulu futhi ephefumulekayo, ekhululekile ukugqoka
Ideal for ukugaya, sandblasting, splashing liquid, njll
Idizayini yomoya: Qiniseka ukuthi ayikuthinti ukuphefumula ngesikhathi sokusebenza eside.
Umklamo we-elastic usetshenziswa ngaphakathi.Ukuvikela kahle uthuli nothuli olungena ukungena.
I-ABS ukuqhumisa umdwebo wesigqoko sokuvikela isigqoko seSandblast
1.Lesi sigqoko sokuzivikela esenziwe nge-PC + ABS, ngokumelana okuhle kokucindezelwa nokubukeka kabusha, futhi sinikeze indawo yokuvikela opharetha
Isendlalelo sangaphakathi yi-PVClens, ungqimba lwangaphandle luyingilazi ehlanganisiwe,
ingathuthukisa ngempumelelo ukumelana nomhuzuko wokuhlinzeka nokunikeza umbono obanzi wabasebenza.
3.The helmethave ukuqhutshwa komoya umhlahlandlela inkatho, ukulungisa ngokuphelele inletstrength.And ifakwe fogspray anti,
abasebenzi bokusiza ngempumelelo bathuthukise ukucaciseleka futhi balungise izinga lokushisa ngaphakathi kwesihogo.
Imikhiqizo ye-4Thishelmetisexportfoundry, ihlangabezana nezindinganiso zokuphepha zikazwelonke, inempilo ende futhi inemiphumela emihle yokuvikela.
I-5 .Ingakwazi futhi ukupakisha nokungathathi hlangothi ngokuya ngezidingo zamakhasimende
Izimpahla zokuvikela Izembatho zomsebenzi Izembatho zokuvikela zeSandblasting
Izingubo zesihlabathi zeSiameseUbude: 180cm,
amazinga amakhulu okuphepha awavikeli kuphela abasebenzi abanenani,
futhi zandisa ukusebenza kahle, futhi zigcina izinkampani ezizitholele udumo njengabahlinzeki nabaqashi.
ihlolwe ukusebenzisa konke ukuhlolwa kokuphepha okuvamile.Yindlela engahambisani nalutho ebonakala
ukuklama kanye nezindinganiso eziphakeme kanye nendlela yokuziphatha ebekwe kukho konke abakwenzayo Ngoba imisebenzi nezimpilo kuncike emikhiqizweni yabo;